Finnair mudiwa naTravelaer kuti ambomira bookings ave nyore kupfuura nakare kose
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Finnair mudiwa naTravelaer kuti ambomira bookings ave nyore kupfuura nakare kose
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Finland Kuputsa Nhau • Investments • nhau • Technology • ushanyi • kutakura
Travelaer, yedhijitari software inopa kune yekushambadzira indasitiri, nhasi yazivisa hutsva hwevatengi kudyidzana neFinnair kuvaka uye kuvhura iyo yendege nyowani yekumisa kubhuka chiitiko.
"Zvatiri kuvaka naTravelaer zvinopfuura kupfuura zvakajairika rwendo nekudzoka," anodaro Rogier Van Enk, Mutevedzeri weMutungamiri weFinnair weDistribution, Commerce Excellence & Data Science. "Isu tanga tichitsvaga kurerutsa mabhaisikopo kune avo vafambi vanoshuvira kunyorera tikiti nekumira muFinland pawebhusaiti yedu. Kuvhura iyi injini yekubhuka kutsva hakugamuchire chete vatengi vedu asiwo chikamu chakakosha mukutsigira chirongwa cheStepOver Finland cheindasitiri yekushanya. ”
Kana dzangowanikwa, vafambi vanokwanisa kubhuka kumira, akawanda maguta, uye dzimwe nzira dzakaomarara mumhando inoshamwaridzika. Injini yekubhuka iri kugadzirirwa kuisa yakazara kutonga kweiri nani kushambadzira ruzivo mumawoko evatengi nekuvapa maturusi ayo ari kuita nyore maitiro.
Finnair irikushandisa Travelaer's Travel PaaS, iyo yakagadzirirwa kusanganisa zvigadzirwa zvemagetsi zvemudenga nemasevhisi muchikuva chimwe chete, uku ichitenderawo vashandisi kuti vaone ruzivo rwavo kuburikidza nehuwandu hwesikirini nemidziyo. Kufamba Paas kuchabvumidza Finnair kukwidza kuwanda kuri kuwedzera kwevatengi vanofarira chiitiko chekumira uye kugadzirisa mari kubva kune aya mabhenji nekuwedzera kweanobatsira mabasa.
Kune Finnair zvakanangana, Travelaer iri kusanganisa anotevera maPaS Pa module mune yavo nyowani yekubheja injini:
Stopover Module, iyo inopa mukana wekuwedzera hotera uye mota kuchengetedza munzira, kufambisa kuronga kwekugara kwavo munzvimbo yekubatanidza, uye module yacho yakanyatsobatanidzwa mukuita kwekubhuka.
Instapricer Module, iyo inoshanda seyakaunganidzwa enjini dzakasiyana dzemitengo (Pros, Amadeus, Google, nezvimwewo), inoongorora uye inotumira kumashure kune iyo Travelaer injini yekubhururuka kubatika, fares, uye mitero yendege. Iyo zvakare inotsigira promo kodhi, kubheja fizi uye chero emitengo maficha ekugadzirisa base fares.
• Yakagadzirirwa Rwendo Module, iyo inobvumidza Finnair kutengesa izere izere nezvimwe zvigadzirwa, senge chigaro, chikafu, pre-yakabhadharwa imba yekutandarira, Wi-Fi, pre-yakabhadharwa mikwende fizi uye nezvimwe. Yakarongedzwa Rwendo inosanganisira Seat Mepu, iyo inosanganisa yakakosha data kubva kuFinnair's ancillary catalog muinjini yekubhuka, ichipa vafambi rubatsiro rwakakwana mukusarudza zvigaro zvavo.
"Chinangwa chekudyidzana kwekutanga neFinnair ndechekuvandudza zvakanyanya ruzivo rwevashandisi pakumisikidza mafambiro akaomarara, sekumira," anodaro Travelaer CEO Mike Slone. “Vafambi vemazuva ano vane zvido nezvishuwo zvakasiyana, uye kufanana nemaindasitiri mazhinji, indasitiri yekushanya yakadzvanywa nehurongwa hwetekinoroji yezvigadzirwa nemapurogiramu asingabatanidze nemamwe masisitimu, anopa ruzivo rwevashandisi rwunovhiringidza uye pakupedzisira anotadza kuzadzisa izvo zvido. Injini nyowani yaFinnair yekubhuka inomiririra danho rekuchinja maitiro. ”
Sekureva kwa Anssi Partanen, Musoro weOnboarding uye maneja weprojekiti yeinjiniya yekubhuka kuFinnair, "Finnair yatotanga kuburitsa injini yekubhuka kumisika yedu inotaura Chirungu uye misika yese ine mhando dzemitauro ichavepo munguva yechirimo ya2018. . ”